Ixesha elizayo leVidiyo yokuNxibelelana eyiDigital 360 | Martech Zone
Ixesha elizayo leVidiyo yokuNxibelelana eyi-360
NgoLwesithathu, Agasti 24, 2011 NgeCawa, ngo-Epreli 24, 2016 Douglas Karr
Le itekhnoloji emangalisa xa uqala ukucinga malunga nezinto ezinokwenzeka. Mhlawumbi unokurekhoda iindaba zamabali amaninzi kwaye ucofe umsebenzisi kwaye ufake okulandelayo. Ngaba unokwenza enye ye-movie eyoyikisayo! 🙂
Bona umhlaba ongazange ubekhona ngevidiyo ye-360 °. Ngaba unokuthelekelela? Abantu bathanda ukujonga iifoto ezingama-360 ° zezitalato abahlala kuzo, okanye bafumane indawo yabo elandelayo yeholide. Inomdla kangakanani, ukuba yayisishukumiso esigcweleyo se-360 ° ividiyo endaweni yomfanekiso omileyo? Ngevidiyo engama-360 ° unokwenza amava okugqibela kwi-Intanethi kubaxhasi bakho. Yabelana ngokuseta okwenyani kobume bendawo okanye iminyhadala.
Ngolwazi oluthe kratya, ndwendwela enye yezi Amagama akude endawo Ndakhe ndafumana, iYellowbird.
tags: Ividiyo engama-360Ividiyo ye360
Ukujonga indawo: I-Marketpath CMS kunye ne-Ecommerce
Sukuvumela Izibalo ukuba zikukhohlise- Ukhuthazo lweNtsholongwane lusebenza